Germy pet peeve: Ongororo pamafungiro evanhu nemaitiro pamajemusi - Nhau | Chikunguru 2021
Nharaunda, Wellness Nhau, Wellness Checkout Kambani Info Info, Hutano Dzidzo Zvinodhaka Info Hutano Dzidzo, Hutano Nharaunda Dzidzo Yehutano Kambani, Info Info Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Kambani, Nhau Info Info, Nhau Dhinda Wellness
Kuru >> Nhau >> Maonero anoita vanhu nezve- uye kudzivisa - utachiona
Maonero anoita vanhu nezve- uye kudzivisa - utachiona
Wepakati munhu anobvumirana nechando chakatenderedza kaviri kana katatu pagore . Panguva inotarisirwa yeupenyu hwe Makore makumi manomwe nemapfumbamwe , ndidzo dzinenge mazana maviri dzinogona kufamba nzendo kuna chiremba, kukosora zvinokwana, uye mazuva ekurwara kubva kubasa muhupenyu hwese.
Kana iwe uri kuyedza kudzivirira kuve inorwara nhamba, zvakakosha kuti uzive kuti nzvimbo idzo vanhu vanowanzo nhonga dzihwa kana dzihwa kazhinji zvine zvinhu zviviri zvakafanana: mapoka uye utachiona. Kune angangoita mazana manomwe nemakumi manomwe ezviuru zvemabhakitiriya nemavirusi muavhareji chimbuzi cheveruzhinji uye mamwe utachiona pamusoro bins yekuchengetedza airport kupfuura iwe ungadai uine hanya kuverenga.
Isu takaongorora vanhu vanopfuura chiuru nezve avo vane hutachiona uye zviito zvinowanzo kukonzera kusangana nehutachiona. Kushambidza maoko kunoreva here kuti iwe haugone kubata dzihwa? Zvakadiniko nekutora mhino dzako, kana kushandisa ruoko rwako kukwiza chimbuzi cheveruzhinji? Verenga paunenge uchipaza zvinonetsa zvevanhu zvehutachiona uye nekupa nzira dzekufamba nharaunda dzakazara mabhakitiriya.
Mararamiro evarwere neane feverish
Kune akawanda maficha ari mumba mako ayo ane mamwe mabhakitiriya kupfuura chigaro chemuzvimbuzi: Usatarisa kupfuura mbiya yako yekudya chipfuyo kana yako smartphone (ehe, yakanaka chose).
Izvi hazvireve kuti haufanire kunetseka nezvekushandisa dzimba dzekuzorora dzevanhu, zvakadaro. Muchokwadi, kazhinji inzvimbo dzinokomberedza chimbuzi-idzo dzinovharwa mukati mapiritsi emadonhwe emvura akasviba -Ndidzo mhosva hombe dzekukanganisa.
Zvichida vanhu vazhinji havasi kuita zvakakwana kuchengetedza mabhakitiriya iwayo. Vanopfuura vanhu vaviri muvashanu vakabvumidzwa kufuratira chimbuzi vasina kutanga vavhara muvharo. Inenge 1 mu3 zvakare yakasiya ndiro dzakasviba musinki, zvinogona kurega huwandu hwehutachiona (salmonella) Vanoungana mukicheni yavo . Kunyangwe isingawanzo kujairika, angangoita 1 muvanhu gumi akasiya chikafu, chikafu chakashatiswa mufiriji, achihotsira mumaoko avo uye vachidya vasina kugeza, kana kutaura vachitsenga chikafu chavo.
Kodhi yebhakitiriya isina kunyorwa
Kunyanya kusununguka uri padhuze nemunhu, kungave kudanana naye kana nhengo yemhuri, zvakanyanya hunhu hwako hunoratidza iko kugadzikana. Kunze kwekusvetuka nguva yekuveura ndebvu kana kunetsekana zvishoma nezvekupfuudza gasi, unogona kunge usiri kunetseka nezvekupararira kwoutachiona kutenderedza vanhu vaunoziva.
Muchokwadi, 71% yevanhu vaida kunwa kubva mugirazi rimwe chete sevadikani vavo, uye vangangoita 58% vaive vakasununguka kudzokera mundiro imwechete yekudya kaviri. Zvinosuruvarisa, muromo ndiyo imwe yenzira dzinokurumidza zvikuru dzekuparadzira utachiona, uye rudo rwaunogovana haruzokutadzise kubva pakurwara kana chero bato riine chinhu chinotapukira.
Kunyangwe iko kugadzikana kwakadzikira pakati pevavaishanda navo nevasingazive, zvimwe zviito zvaive zvichionekwa sezvisingagamuchirwe zvisinei nekambani. Vanenge makumi mapfumbamwe nemaviri muzana yevanhu vakati hazvina kumbobvira zvakanaka kunhonga mhino dzako uye kudya zvakawanikwa (zvinova zvine njodzi nekuda kwehutachiona hwaungave uri kuisa mumhino dzako pane kuburitsa), uye mumwe 88% akataura zvakafanana nezvehutsanana husina kunaka mushure mekuenda kuchimbuzi.
apple cider vhiniga yakanaka kune yakakwira BP
Kudzivirira utachiona zvese pamwechete
Kana utachiona chaihwo huri kwese kwese (uye ivo varipo), vanhu vane hutano vanogona sei kudzivirira tupukanana twakaipa tungaita kuti urware?
Kunyangwe kuedza uku kuchishanda, vanhu vazhinji vanenge vachiziva kugona kwehutachiona hutachiona. Vanoda kusvika makumi matanhatu nezviviri muzana yevanhu vakati vakaita nhamburiko yekuedza kunzvenga kunwa zvinwiwa nevamwe vanhu. Vanopfuura hafu vakabvumirana pamusoro pekukosha kwekusabata gonhi rekubuda kunze mune chimbuzi cheveruzhinji, uye vangangoita vazhinji vakaedza kuburitsa zvimbuzi zveruzhinji netsoka panzvimbo pemaoko avo.
Asi pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa nevanhu kana vachida kudzivirira kurwara. Kunyangwe kupfeka chifukidzo chekuvhiya kunogona kubatsira kudzivirira kunhonga chirwere chemumhepo ( kusanganisira dzihwa uye coronavirus ), chete 6% yevakabvunzwa vakavapfekedza vakatenderedza vanhu vanorwara. Iwo maCentre ekurapa nekudzivirira Zvirwere ( CDC ) yakashuma 15.5 mamirioni ekushanyirwa kwechiremba uye 4.1 miriyoni yekushanya kamuri yekukurumidzira nekuda kwezvirwere zvinotapukira mu2016-17. Pamusoro pekudzidzira hutsanana munzvimbo dzinopararira utachiona, kugara kusvika pazuvano pane majekiseni inogona kudzivirira iwe nenharaunda yako kubva mukutapukirwa nezvirwere zvakakomba.
RELATED: COVID-19 chiteshi chemashoko
Vakadzi vs. varume: Vanodzivirira sei utachiona
Vakadzi vanogona kuva nekombamiro yakasimba zvikuru yokuramba vakachena — asi kudzivisa utachiona kungasavaita vatano.
sei kubvisa uti varume
Kunyangwe zvavo vaiwanzodzivirira kugovana zvinwiwa, bata mweya wavo vachifamba vachipfuura mumwe munhu achikosora, uye vachitarisa kure nechimbuzi chevanhu vasati vabuda, vakadzi vachiri kungorwara kazhinji kupfuura varume. Kuenzaniswa neanenge makumi mana nechimwe muzana evarume vakati vairwara kanopfuura kamwe chete gore rega, vanopfuura hafu yevakadzi vakataura zvakafanana.
Pane zvakawanda zvekudzivirira kutonhora uye mwaka wefuru pane kuongorora zvaunosangana nehukama hwepedyo nazvo, uye zuva nezuva zvinovaka muviri uye mazamu ekurovedza muviri anoita basa rakakosha mukuchengetedza muviri uine hutano.
Nzvimbo dzinowanikwa vanhu nehutachiona
Musoro une hunyoro. Iyo tinge shoma yemuviri kurwadziwa. Kusungwa, kana kunyangwe ingori mhino inomhanya. Izvi ndezvimwe zvezviratidzo zvakajairika uye zvinotaurisa zvekuti immune system yako yashaiwa simba uye uri kurwara. Edza sezvaungaita, kana mumwe munhu akaridza mhino yake kana kuhotsira padyo newe, unogona kuratidzwa kune chero hutachiona hwaakatakura.
Vazhinji vanhu vainyanya kunetseka nekuratidzwa kune vavasingazivi uye nzvimbo dzeruzhinji kupfuura zvavaive nevanhu vavanoziva. Kufambisa kweruzhinji, kufamba nendege, mapoka makuru, uye kunyange kutasva-kugovana masevhisi akaverengerwa pakati penzvimbo dzakanyanya dzehutachiona, nepo kuungana kwemhuri kwemazororo uye kuungana pamwe neshamwari dzepedyo zvaisanyanya kunetsa. Nepo nzvimbo dzakazara nevanhu dzingave nzvimbo yehutachiona, hutachiona hunokuvadza, uye kusvibiswa, shamwari nemhuri vanogona kuramba vachikurwarisa kana vachinzwa pasi pemamiriro ekunze.
RELATED: Matipi ekugara uine hutano panguva yekufamba kwezororo
Zvinowanzo kunetsa nezvehutachiona
Vakadzi vaisangoita zvakanyanya kurwara kana vachienzaniswa nevarume - vaivewo zvakare nekwaniso yekuva nehanya nekupararira kwoutachiona munzvimbo dzinowanikwa vanhu.
Nepo vari pasi pe31% yevarume vaishushikana nehutachiona pazvifambiso zveveruzhinji, inopfuura hafu yevakadzi vakataura zvakafanana. Uku kutya kwemajemusi hakugone kuiswa zvisiri izvo, futi. Imwe ongororo yakawana zvakapetwa mazana mapfumbamwe kuwanda kweutachiona mu New York mota yepasi pane patafura yetereyi yendege. Kana icho chisiri chikonzero che kutakura kwakatenderedza ruoko sanitizer , chii?
Vakadzi vaive zvakare vakanyanya kunetsekana nezvekufamba nendege, ruzhinji rwevanhu, uye nemasevhisi-kugovana masevhisi kana zvasvika kune hutachiona. Asi izvo, apo varume vachiri kunetseka nezvehutachiona munzvimbo zhinji dzakafanana, kushushikana kwavo kwakatadza kukunda kwevakadzi mune ese muenzaniso.
Kugara uine hutano
Kana zvasvika pakudzivirira furu kana furuu, iwe unofanirwa kuita zvinopfuura kutarisa kune vausingazivi nemajemusi avo. Nepo nzvimbo dzakaita sendege kana zvimbuzi zveveruzhinji zvichikambaira nemhando dzose dzehutachiona, vanhu vazhinji havana hanya zvakakwana nezvehutachiona hwavanogona kunge vachinhonga kubva kuvanhu vakavakomberedza. Kunyangwe vakadzi, avo vainyanya kuziva nezvemajeremusi enharaunda, vaive nemikana yakawanda kupfuura varume kuti varware kakawanda pagore.
Kana zvasvika pakutarisira hutano hwako, SingleCare ine musana wako. Isu tinokupa iwe kuchengetedza pamishonga yekunyorera yaunoda kuti unzwe zvirinani. NeSingleCare, unogona kuwana zvirevo zvako, enzanisa mitengo, uye chengeta ku pharmacy. Zviri nyore kudaro. Tishanyire pa singlecare.com kutanga kuponesa nhasi.
Maitiro uye kukwana
Yedu data inouya kubva kuongororo yevanhu chiuru nemazana maviri nemakumi maviri nevaviri vanetsekana nehutachiona kusvika padanho rakange rakaunganidzwa kuburikidza neAmazon Mechanical Turk. Kuparara kwedu kwevanhu kwakashandiswa muchirongwa kwaive kwakadai: 44.9% yevatori vechikamu vedu vaive varume, uye 55.1% vaive vakadzi. Vatori vechikamu vaitangira muzera kubva pa19 kusvika pamakumi masere. Izvo zvaireva zera redu raive 37.4, uye kutsauka kwakajairika kwaive 11.5. Huwandu hwevanhu vane chiyero chemuenzaniso pazasi pe26 vakasarudzika kubva pakuongorora kwedu. Data rakaburitswa muchidzidzo chino rinovimba nekuzvitaurira, uye kuongororwa kwehuwandu hakuna kuitiswa muchidzidzo chino.
Doro uye mushonga wekusvotesa: Ndinogona here kusanganisa Dramamine nedoro?
Asina-kukotsira Benadryl: Ndedzipi sarudzo dzako?
Ona mishonga yakatemerwa zvakanyanya muna 2019
Kuenda pane antidepressants: Yekutangisa gwara kune mhedzisiro
Cephalexin vs.Amoxicillin: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Kufunga nezve ADHD mishonga? Mutungamiri wako kumunhu mukuru ADHD kurapwa
Skelaxin vs. Flexeril: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Osteoarthritis vs. rheumatoid arthritis: Ndeupi wandinayo?
Chii chinoitika kumishonga yako kana chemishonga yako ikavhara?
Kufunga nezve HSA? Verenga zvakanakira nezvakaipa zveakaundi yekuchengetedza hutano
Ndeapi marwadzo ekurapa akachengeteka kutora uchiri nepamuviri?
is naproxen uye aleve zvakafanana?
chii chinogona kukonzera nhema nhema ye methamphetamine
chii chandingatora zvakasununguka pakuzvimbirwa
ndichaziva sei kuronga b kwakashanda
zvakaipa here kucheka mapiritsi nepakati
nderupi bhakitiriya runorapwa keflex?
anoita keto kudya kunoshanda kune wese munhu